अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ईन्स्पेक्टर राई ! - Jerung Films
अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ईन्स्पेक्टर राई !
बेलबारी । प्रहरीप्रति जनबिश्वास कम हुँदै गएका बेला एकजना ईन्स्पेक्टर भने जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न सफल भएका छन । ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीको नेतृत्व सम्हाल्न आएका प्रहरी निरिक्षक रामकुमार राई यतिबेला चर्चाको पात्र बनेका छन ।
पहिलोपटक ईलाका सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका उनलाई देख्दा शुरुमा कसैले पनि बिश्वास गरेनन् । अबिवाहित लक्का जवान त्यसमाथि अनुभव समेत नभएको सुन्दा र देख्दा शुरुमा धेरैले उनलाई देखेर नाक खुम्चाए । मिलनसार स्वभावका राईको काम गर्ने शैली पुराना प्रहरी निरिक्षक भन्दा फरक र चुस्तदुरुस्त भएपछि उनीप्रति जनताको भरोसा जागेको छ ।
प्रमुख भएर आएपछि शुरुमा करिब १२ बर्ष अघि भाउन्नेमा भएको चालक हत्याकाण्ड देखि एक दशक अघि भएका बलात्कार,लुटपाट लगायतका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल उनी त्यसपछि जनताको नजरमा पर्न सफल भएका हुन । सुन्दरहरैचामा भएको टिपर काण्डमा धेरैले उनी सो काण्ड सल्टाउन असफल हुन्छन र सरुवा हुन्छन भन्ने सोचेका थिए । सोही बेला उनले एउटा जादु देखाए । एकाएक सो काण्ड सेलाएर गयो । त्यसपछि उनको चर्चा थप चुलियो ।
लगत्तै बेलबारीमा भएका रमिला राई हत्याकाण्डमा संलग्नलाई पक्राउ गरी पिडितको घाउमा मल्हम लगाउन सफल भए । यी लगायत दर्जनौ काण्डमा उनले गरेका सफल अनुसन्धान र भुमिका तारिफयोग्य रहेको स्थानीय बताउँछन ।
दुईवटा फरक र नयाँ मुद्धा दर्ता
नयाँ ऐन कार्यन्वयन भएसँगै ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारी मोरङमा २ वटा नयाँ किसिमका मुद्धा दर्ता भएका छन । ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीका ईन्स्पेक्टर राईका अनुसार जिल्लामै पहिलोपटक सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्नेलाई सोही कानुन बमोजिम बोक्सी बिरुद्धको मुद्धा र सुन्दरहरैचामै भएको एक घटनालाई लिएर दुरुत्साहन मुद्धा दर्ता भएको छ ।
करिब २ साताअघि सुन्दरहरैचामा बोक्सीको आरोपमा बृद्धबृद्धालाई कुटपिट गर्नेहरुलाई मुद्धा चलाईएको छ भने एक महिनाअघि हरैचामा एक ब्यत्तिले आत्माहत्या गरेको र उनलाई आत्महत्या गराउन बाध्य बनाएको आरोपमा सोही ठाँउकी एक महिलालाई दुरुत्साहन मुद्धा दर्ता गराई म्याद थप गरिएको राईले जानकारी दिएका छन ।
नयाँ ऐन अनुसार कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईएको पाईएमा दुरुत्साहन मुद्धा लाग्ने गरेको छ । सोही आरोप प्रमाणित भएमा पाँच बर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजार सम्म जरिवाना हुन सक्ने प्राबधान रहेको राईले बताए । ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीमा प्रमुख भएर आएपछि राईले छोटो समयमा अपराध अनुसन्धानमा महत्वपुर्ण सफलता हात पार्न सफल मात्र भएका छैनन । जनताको भरोसाको केन्द्र समेत बन्न सफल भएका छन साभार पुर्बेलिन्युजबाट